PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-10-29 - Izikweletu zidala izinkinga emsebenzini
Izikweletu zidala izinkinga emsebenzini
Isolezwe ngeSonto - 2017-10-29 - IMIBONO - KABELO KHUMALO
UKHWANTALALA oludalwa yizinkinga zezimali nokucwila ezikweletwini, kuhamba ibanga elide kube nengoba kugcina kunomthelela omubi empilweni yabantu nasezingqondweni. Lokhu kuze kubaphazamise nasemsebenzini, abasebenzi bagcine bengenzi kahle okanye bangezi nhlobo.
Ucwaningo lwakamuva olucashunwe emithonjeni eyahlukene, luveza ukuthi abantu bakuleli bayagwiliza ezikweletwini, badonsa kanzima. Inhloko kwi-Alexander Forbes Health Management Solutions, uNkk Myrna Sachs, ithi lesi simo sidala omkhulu umonakalo.
“Ingcindezi yomqondo ehambisana nokhwantalala nokungakhululeki emoyeni kumuntu, konke kugcina kudala izinkinga zokulova emsebenzini. Kubalulekile ukunakekela ingqondo kumuntu. Into embi ngalezi zinkinga zezezimali ukuthi zithuntubeza ingqondo yomuntu,’’ kusho uNkk Sachs.
Uthe abantu abanale nkinga bagcina bephuthelwa amathuba okwenyuselwa ezikhundleni eziholela kangcono emsebenzini, ngenxa yokuthi umsebenzi wabo awubi muhle.
Olunye ucwaningo olwenziwe abe-Idea engaphansi kwe-London School of Economics, luveza ukuthi iNingizimu Afrika ilahlekelwa u-R232 billion ngonyaka ngenxa yale nkinga egcina ibambezela imikhiqizo ezimbonini.
Abasebenzi abaningi abezi emsebenzini, uma kwenzekile beza basuke bengekho esimeni sokusebenza.
Olunye ucwaningo olwenziwe yi-EuroMonitor luveza ukuthi abantu bakuleli bagcina bengawanakekeli amehlo abo ngoba bezama ukonga imali. Ucwaningo luveza ukuthi izinga lokuthengwa kwezibuko zamehlo liyehla ngenxa yokuthi abantu baqoma ukungazithengi ngoba beshoda ngemali.
Abakwa-Experian bathi iConsumer Default Index
(CDI) yabo ithi iningi labantu abanenkinga yezimali bagcina bengakwazi ukukhokha izikweletu ezikhokhwa nyanga zonke. Bathi lo mkhuba wokungakhokheli izikweletu zabo ubhoke kakhulu ezikweletini zemizi, yizimoto, izimali ezibolekiwe nama-credit card. Le nkampani iphinde iveze nokuthi phakathi kukaMeyi noJulayi kulo nyaka, ilinganiselwa ku-R13.4 billion imali engakhokhwanga ngenxa yabantu abaphuthayo ukukhokha.
Ucwaningo lwezikweletu lubhekwa ngokwabantu ngokwehlukana kwabo. Kubhekwa iminyaka nezindawo abahlala kuzo.
Ucwaningo luveza ukuthi abantu abaneminyaka ephakathi kuka-25 kuya ku-29 ubudala, abafundile ngokwenele ukwedlula ebangeni leshumi. Iningi labo liphila ngomholo ongu-R38 200 ngonyaka sebehlanganisiwe onke amalungu omndeni.
Iningi labo lihlala emijondolo abayikhokhela zinyanga zonke. Ucwaningo luveza ukuthi laba bantu abadonsa kanzima empilweni bagcina bengena ezikweletwini bezama ukuziphilisa. Okunye okubahluphayo ukungabi nolwazi ngezezimali nokwenza bahluleke ukulawula izikweletu zabo.
Abakwa-Experian baqhuba bathi izikweletu zivulwa ngabantu abathathwa njengabasebenza kanzima, nezidala ukuthi isamba sazo sifinyelele kuR 203.25 billion.
Lezi zikweletu zithinta abantu abafundile abaneminyaka ephakathi kuka-35 ubudala kuya ku-49 ubudala, abenza imali engu-R150 000 ngonyaka.
Laba bantu bahlala emizini engaqediwe ukukhokhelwa esezindaweni ezakhele idolobha ngenhloso yokusondezela umsebenzi.
Umqondisi we-Experian South Africa, uMnuz Simon Russell, uthe imfundo iba nomthelela endleleni yokuphatha izindaba zezimali kumuntu.
“Indaba yemfundo isalokhu iyinselelo enkulu kuleli, sisaqhubeka nokugqugquzela ukuba inakisiswe ukuze kuliwe